တရုတ်မွတ်စလင်များအပေါ် ပုံစံသစ်တစ်မျိုးဖြင့် တရုတ်အစိုးရက ဘာသာရေး ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှု ပြုလုပ် | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဘာသာရေးခွဲခြားမှု အထူးစိုးရိမ်ရသည့် နိုင်ငံစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်နိုင်ရန် အမေရိကန် အပါအ၀င် အခြားနိုင်ငံများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်မည်
Chinese Imams Forced to Dance »
M-Media Ref:onislam: Chinese Imams Forced to Dance
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၀၊ ၂၀၁၅
– ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်သည့်ဆောင်ရွက်မှုအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်း ဇင်ဂျန်းပြည်နယ်ရှိ ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များမှ ရှေ့ဆောင်အီမာမ်များကို စုဝေးကာ တရုတ်အစိုးရက အတင်းအကျပ် ကပြခိုင်းခဲ့ပြီး လူငယ်များအား ဘာသာရေးအသိပညာ သင်ကြားပေးခြင်းမပြုရန်နှင့် ၀တ်ပြုဆုတောင်းမှုမှာ စိတ်နှလုံးသားကို ပျက်စီးစေသည်ဟု သင်ကြားရန် ကျမ်းကျိန်ခိုင်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်ကို Worl Bulletin က ယမန်နေ့တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီး အီမာမ်များမှာ “ကျွန်တော်တို့၏ ၀င်ငွေမှာ ဘုရားသခင်ဆီကလာတာမဟုတ်။ CKP ထံမှလာသည်” ဟု ကျွေးကြော်ရန် ဖိအားပေးခြင်းခံခဲ့ရသည်။
State Chinese သတင်းဌာနကမူ အဆိုပါအီမာမ်များမှာ ယဉ်ကျေးမှုခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရင်ပြင်တွင် စုရုံးခဲ့ကြရပြီး ကပြရန်
ဖိအားပေးခြင်းခံခဲ့ရကာ နိုင်ငံအား ထောက်ခံအားပေးသည့် ကျွေးကြော်သံများကိုလည်း ကျွေးကြော်ခဲ့ရသည်ဟု
အဆိုပါ ကျွေးကြော်သံများတွင် “တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းခြင်းက စိတ်နှလုံးငြိမ်းချမ်းမှုကို ပေးသည်” စသဖြင့် ဘာသာတရားထက်
နိုင်ငံကို အမွှမ်းတင်သည့် ကျွေးကျော်သံများလည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် လူငယ်များအား ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်များမှ ဝေးကွာအောင် ဆောင်ရွက်ရန်၊ ၀တ်ပြုဆုတောင်းမှုက ကျန်းမာရေးအား ထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟု ၀ါဒဖြန့်ရန်နှင့် လူငယ်များအား ကခုန်မြူးတူးခြင်းကိုသာ သင်ကြားပေးရန် တရုတ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက အီမာမ်များအား လမ်းညွှန်ချက်ပေးခဲ့သည်။
အမျိုးသမီးဆရာများကိုလည်း ကလေးများအား ကခုန်ခြင်းကို သင်ကြားပေးရန် ဘာသာရေး ပညာသင်ကြားခြင်းမှ ဝေးကွာအောင်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့ပြီး ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်မည်ဟုလည်း ကျမ်းကျိန်ခိုင်းခဲ့သည်။
ဇင်ဂျန်းပြည်နယ်တွင် နေထိုင်ကြသည့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များမှာ တူရကီစကားပြော အူဂွါရ် လူမျိုးများဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဒေသမှာ ၁၉၉၅ ခုနှစ်စ၍ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရခဲ့သော်လည်း တရုတ်အာဏာပိုင်များက မကြာခဏ ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များကမူ တရုတ်အာဏာပိုင်းများမှာ ဇင်ဂျန်းပြည်နယ်ရှိ အူဂွါရ် မွတ်စလင်များကို အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေး ခေါင်းစဉ်တပ်၍ ဘာသာရေး ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည် စွပ်စွဲခဲ့သည်။
တရုတ်အစိုးရမှာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလက အစိုးရအစောက်အအုံများ၌ ဘာသာရေးလိုက်နာကျင့်သုံးခွင့်ကို ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီး ဘာသာရေးအရ သတ်မှတ်ထားသော ၀တ်စားဆင်ယင်မှုများကိုလည်း မ၀တ်ဆင်ရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင်
သြဂုတ်လကလည်း ဇင်ဂျန်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း ကရာမီမြို့တွင် မုတ်ဆိတ်ရှိသော မွတ်စလင်အမျိုးသားများ၊ လုံခြုံစွာ ၀တ်ဆင်ထားသော မွတ်စလင်အမျိုးသမီးများကို အများပြည်သူသုံး ဘတ်စ်ကားများ အသုံးပြုခြင်းကို ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လအတွင်းကလည်း မွတ်စလင်ကျောင်းသားများနှင့် အစိုးရ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် ရမ်ဇာန်ဥပုသ်လတွင် ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်ခြင်းမပြုရန် တရုတ်အစိုးရက တားမြစ်ပိတ်ပင်ခဲ့သည်။
တရုတ်အစိုးရမှာ ခရစ်ယာန်အများစုရှိရာ ဒေသများတွင်လည်း ခရစ်ယာအယူဝါဒ လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းကို တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများ ရှိခဲ့ပြီး ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းများကိုလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြ၍ ဖြိုချဖျက်ဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
This entry was posted on February 12, 2015 at 8:41 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.